Dowladda Jabuuti: “Waan ka Soo Horjeednaa Hadalkii Farmaajo Uu ka jeediyay Asmara” DOKUMENTI | Afrikada
Dowladda Jabuuti: “Waan ka Soo Horjeednaa Hadalkii Farmaajo Uu ka jeediyay Asmara” DOKUMENTI
Aug 1, 2018 - Dhiibo Aragtidaada
Afrikada, Djibouti: Dowladda wadanka Jabuuti ayaa warqad ay soo gaarsiisay warbaahinta ku sheegtay in ay aad uga xun tahay in uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo uu jeediyo hadal khatar ku ah mustaqbalka jamhuuriyadda Jabuuti.
Warqaddan oo ka soo baxday safaaradda Jabuuti ay ku leedahay Muqdisho ayaa lagu sheegay in Jabuuti aysan marnaba ka fileynin dowladda Soomaaliya weliba hogaamiye Farmaajo in uu ku dhawaaqo ama soo dhex galo arrimaha siyaasadeed ee Jabuuti iyo Eritrea ka dhex aloosan.
Hadalkan ayey Jabuuti tilmaantay in uu dowladeeda ku abuuray cabsi iyo khalkhal iyadoo Farmaajo uu toos u faro geliyay arrimaha diblumaasiyadeed ee Jabuuti iyo Eritrea, sida ay hadalka u dhigtay.
Muxuu ka dhashay hadalku?
Warbixintan ayaa la soo saaray kadib markii uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Asmara ka khudbeeyay isaga oo yiri: “Waxaan Qaramada Midoobey ka codsaneynaa in ay cunaqabateynta ka qaado dowladda Eritrea” hadalkan ayaa noqday mid Jabuuti uu qalqal geliyay wadankaasi Jabuuti.
Sida ka muuqata warqadda waxaa Jabuuti ay sheegtay in ay ciidan xoog leh u dirtay Soomaaliya si ay si walaaltinimo leh u garab qabato Soomaaliya balse Eritrea iyadoo xoog leh ayeysan wax ciidan ah oo u dagaalama aysan u soo dirin dowladda federaalka ah.
AKHRI WARQADDA JABUUTI SOO SAARTAY:
Warbaahinta Afrikada kala soo Xiriir Email-ka afrikada.com@gmail.com
DAAWO: Ciidanka XDS oo cabsi darteed awoodooda milleteri ku soo bandhigaya masrax qol dhexdiis!
Afrikada, Muqdisho: Xilli aysan jirin meel kale ama aysan fagaaraha ku soo bandhigi ...
DAAWO: Xuska Sanadguurada Ciidammada XDS oo ka soconeysa Muqdisho
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, waxaa la Aasaasay 12-kii April 1960-kii oo hadda ka soo ...
Kheyre oo la kulmay John Bolton. SAWIR
Afrikada, Muqdisho: R/W Xasan Cali Kheyre ayaa kulan la qaatay la taliyaha amniga dalka ...
VIDEO: Afgembi ka dhacay dalka Suudaan & Saraakiil la xiray
Afrikada, Khartoum: Kadib gadood maalmo badan soconayey ayaa waxaa la sheegayaa in maanta milleteriga ...
Banaanbaxayaasha Suudaan oo codsaday in la dhiso dowlad ku meel-gaar ah
Afrikada, Muqdisho: Banaanbaxayaasha wadanka Suudaan ayaa Isniintii ka codsaday ciidamada wadankaasi in ay soo ...
© 2018 Afrikada - All rights reserved.